အင်ဒိုနီးရှားမှ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို FBSကထပ်မံရရှိခဲ့ပြန်ပါပြီ!
FBS သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုရှိတဲ့ ငွေကြေးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ပြု ညွှန်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကလွန်စွာမှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်စိတ်ချယူံကြည်ရမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေမှုတို့ကြောင့် အာဆီယံကုမ္ပဏီကောင်းဆုThe Asean Good Company Awardကို အင်ဒိုနီးရှားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်. ယခုကဲ့သို့အသိအမှတ်ပြုခံရသည်မှာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေထဲတွင် FBSကသာ ပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဖောက်သည်တော်တွေကိုပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေရန်သာမက ပိုမိုရောင်းဝယ်နိုင်ကြစေရန်ပါရည်ရွယ်ပြီး အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေနှင့် စစ်မှန်အဆင်ပြေစေမယ့် အရောင်းအ၀ယ်စည်းကမ်းချက်တွေကိုဖန်တီးပေးဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့သာ ယခုလို ၂၀၁၆ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးတော်ဆောင်ဆု "Best Broker Services 2016"ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကလွန်စွာမှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုရရှိတဲ့ဆုတံဆိပ်နှစ်ခု အာဆီယံကုမ္ပဏီကောင်းဆုThe Asean Good Company Awardနှင့်၂၀၁၆ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးတော်ဆောင်ဆု "Best Broker Services 2016" ဆုတွေကို ယခင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်၃၀ကျော်ရဲ့ဘေးမှာ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ ထားရှိသွားမှာပါ. သို့သော် ဆုတံဆိပ်တွေဘယ်လိုရရပါ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးဆုလာဘ်ကတော့ ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့ ရင်ထဲအသည်းထဲက နှစ်သက်သဘောကျမှုကိုသာ FBSကလိုချင်တာပါ!
FBSကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖောက်သည်တော်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်! ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းက သန်းနဲ့ချီတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်သမားတွေကို အကျိုးရှိအောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေတိုင်း နာရီတွေတိုင်းမှာ ဂုဏ်ယူနေမိပါတယ် – FBS ရင်းနှီးမှုအာမခံအစီအစဉ်, အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် ပရိမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ, အပိုဆုအစီအစဉ်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ ဖောက်သည်တော်တို့ကိုဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်. ဖောက်သည်တော်တို့ကို ပြည့်စုံကြွယ်ဝ စိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက် ၀န်ဆောင်ပေးနေပါတယ်!